people Nepal » देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट यसरी रोकिंदैछ देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट यसरी रोकिंदैछ – people Nepal
देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट यसरी रोकिंदैछ
१३ जेठ, काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि प्रधानमन्त्री बनिछोड्ने र एमाले अध्यक्ष केपी ओली जसरी पनि उनलाई रोकिछोड्ने अतिवादबाट नेपाली राजनीति यतिखेर प्रभावित मात्रै छैन, चार प्रदेशमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि प्रभावित बन्न सक्ने डर उत्पन्न भएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचन शान्ति र निष्पक्षताका साथ गराएर पनि सत्ता स्वार्थमा देउवाले अति नै गरेपछि दुई दिन अघि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्यो । निर्वाचनको मुखमा यसरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि प्रदेश १, २, ५ र ७ को निर्वाचन अन्यौलपूर्ण बन्न पुगेको छ । अझै तराईमा २२ वटा स्थानीय तह थप्न सरकारले गरेको निर्णयलाई तत्काल कायम नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिने र मधेसका केही दलले आन्दोलन घोषणा गरेपछि निर्वाचन हुँदैन की बन्ने आशंकलाई बल प्रदान गरेको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको स्वादले प्रफुल्लित भएका जनहरु यतिखेर दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि होस् र जनप्रतिनिधिले जनताका काम गरुन् भन्ने चाहन्छन् । तर, राजनीतिको केन्द्रमा कसैलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने कसैलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने अतिवाद देखिएपछि निर्वाचन हुने १५ दिन अघिसम्म पनि अन्योलको बादल मडारिएको हो ।
यी हुन प्रचण्डले देउवाको काँधमा बिसाएका जिम्मेवारी, देउवाले पूरा गर्लान ?
यस्तो छ एमाले डिजाइन
एमालेले पछिल्लो समय संसद नै चल्न दिएको छैन । संसद नै चल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट राजीनामा दिए । बल्ल नीति कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुन दिएको एमालेले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न नदिई पुनः संसद अवरुद्ध गर्यो । यो क्रम दुई दिनेदेखि जारी छ ।
यता जसरी पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न एमालेले अब सहमतीय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कार्डसमेत फ्याकेको छ । सहमति हुन्छ भने प्रचण्डलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन् । उनले संसद अवरुद्ध गरेर शुक्रबार संसदबाट बाहिरिंदै गर्दा यस्तो बताउनुको पछाडि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न खोज्नु हो भन्ने सजिलै बुझिन्छ । ओलीले यस्तो गर्नुको पछाडि यो गठबन्धन लामो समयसम्म जान्छ भन्ने डरले भएको बताइन्छ । अहिले फेरि कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा अर्को संसदीय चुनावमा पनि यही गठबन्धन कायम हुँदा आफू कमजोर भइने डरले एमाले जसरी हुन्छ माओवादी र कांग्रेसलाई मिल्नै नदिने योजनामा छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेलको कार्डसमेत फ्याक्ने बुझिएको छ । होइन प्रचण्डमा सहमति हुँदैन भने कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा भए पनि सहमतिको सरकार बनाउन सकिने कार्ड पनि एमालेको छ । यो परिपक्व भइसकेको विषय होइन तर, एमालेमा छलफलमा उठेको विषय हो । सत्ता र शक्तिको लागि देउवा जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने डर एमालेमा देखिन्छ । तसर्थ कहिले प्रचण्ड त कहिले रामचन्द्रले नेतृत्व गर्न सक्छन् भनेर एमालेले कार्ड फ्याक्दै समय लम्बाउँदै छ ।
यी हुन् देउवा सरकारका मन्त्री !
सहमतीय सरकार गठन हुन नसके पनि ३१ जेठको निर्वाचनसम्म देउवालाई रोक्क सकिए उनीबाट हुने शक्तिको दुरुपयोगले निर्वाचनमा आफूहरु कमजोर बन्न सक्ने डरको अन्त्य हुने बुझाई पनि एमालेमा छ । सत्ताका खेलाडी देउवाले राज्यसत्ताको प्रयोग गर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणामप्रति नै एमालेको डर र आशंका उत्पन्न भएकोले जसरी पनि देउवालाई रोक्न एमाले लागिपरेको हो ।